केपी ओली कठपुतली हुन्ः डा. बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल निर्णायक रहेको बताएका छन्। भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तर्यमा अमेरिकन, चीन र भारतको स्वार्थ मिसिएको बताएका हुन्।
संविधानसभा परिषद् मञ्चले सोमबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘कति कुरा भन्ने कति नभन्ने ? राजनीतिक अस्थिरता बढाउन हाम्रा मित्र राष्ट्रहरुको भूमिका छैन भन्न सकिँदैन। संसद विघटनको अन्तर्यमा पनि केही न केही छ।’ भट्टराईले संसारभरका तानाशाहहरुले आफ्नो निरंकुश प्रवृत्ति ढाक्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जस्तै चुनाव भन्ने गरेको बताए।
‘चुनाव मात्र लोकतन्त्र होइन। तानाशाहहरुले आफ्ना निरंकुश प्रवृत्तिलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति चुनावको बहाना जहिले पनि गर्छन्। संसारभरिका तानाशाहहरु जसले लोकतन्त्रको हत्या गरेका छन्, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। तिनले सधैं चुनाव भन्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो प्रतिनिधिभाको मात्र होइन संविधानकै विघटन हो। प्रतिगमनतर्फको यात्रा हो।’
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेर बनेको संविधान जतिसुकै त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण भए पनि त्यसलाई जोगाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले गलत व्यक्तिको हातमा शासन पुगेका कारण संविधान असुरक्षित भएको आरोप समेत लगाए। ‘राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने शक्तिहरुले फाँसीवादी, लोकतन्त्र विरोधी र भष्मासुर प्रवृत्तिका केपी ओलीलाई सत्ता सुम्पनु ठूलो भुल थियो। ओलीको धुन्दुकारी प्रवृत्तिले मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनामा लैजान्छ,’ भट्टराईले भने।